Shirkadda Tabouk Shipping oo bixineysa tigidhka Binti Jeylaani ee Muqdisho Nairobi
SOMALITALK - BINTI JEYLAANI
Shirkadda Tabouk Shipping (Dubai) oo Qaaday Tigidh-ka Binti Jeylaani ee Muqdisho-Nairobi
Binti Jaylaani oo La soo Gaarsiiyey Lacago deeq ah
Shirkadda Tabouk Shipping (Dubai) oo Ballan Qaaday Tigidh-ka Binti Jeylaani ee Muqdisho-Nairobi
June 1, 2007: Bahda SomaliTalk.com waxay shacabka Soomaaliyeed ee la socdey arrinta Binti Jeylaani la socodsiinayaan in shirkadda Tabouk Shipping ee xarunteedu tahay Dubai ay ballan qaaday in ay bixin doonto tigidha diyaaradda ee Muqdisho-Nairobi.
Markii aan qormadii tigirka loogu radinayo daabacnay (May 31, 2007) waxay SomaliTalk.com ballan qaaday in shirkadda ugu horeysa ee bixisa tigir-ka diyaaadda ee Binti Jeylani ee Muqdisho-Nairobi in shirkaddaas muddo hal sano ah lagu xayaysiin doono SomaliTalk.com. Waxaa markiiba May 31, 2007 nasoo gaarey in shirkaada Tabouk Shipping ay bixineyso tikidhkaas. Mid ka mid hawl-wadeenada shirkadda Tabouk Shipping, oo ah Abshir Xuseen Cusmaan oo jooga magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka carabta, waxa uu sheegay in lacagta ay shirkaddu ballan qaaday ee tigidhka Binti Jeylaani aan wax shuruud ah ku xirnayn, haddii la xayaysiisyo iyo haddii kaleba waa sadaqo, ayuu yiri. Haddaba bahda SomaliTalk.com ayagoo u mahad celinaya shirkadda Tabouk ayey siday ballan qaadeen xayaysiinta shirkadda bixisa tigidhaas waxay hal sano shirkaddaas xayaysiiskeedu ku jiri doontaa shabakada, waxaana dadweynaha Soomaaliyeed ku dhiiri gelineynaa ay macaamilaad wanaagsan la yeeshaan shirkadda Tabouk oo adeegsadaan adeegsiyadeeda.
Magaalada Nairobi waxaa Binti Jeylaani loogu diyaarinayaa sidii ay uga qaadan lahayd Visa-da dal ku galka Australia oo ah meesha looga helay dhakhaatiirta lagaga qali doono burada weyn ee afkeeda ka soo baxday, buradaas oo ku taaley muddo laba sano ah, balse hadda aad ugu soo weynaaneysa ayna u bahan tahay qalliin degdeg ah. Hadda waxaa shacabka Soomaaliyeed sugaya caawinta Binti inta ay ku sugan tahay Kenya. [Halkan kala xiriir shirkadda Tabouk Shipping]
Iyadoo dadka Soomaaliyeed ee ku nool dibadaha looga bartay inay gacan siiyaan dadkooda ayaa waxaa deeq lacageed la soo gaarsiiyey gabar Soomaaliyeed oo afka buro uga soo baxday oo lagu magacaabo Binti Jaylaani, lacagahaasi deeqda ah oo ka kala yimid dadka Soomaaliyeed ee ku nool caalamka daafihiisa ayaa waxaa gaarsiiyey Amiin Yuusuf Khasaaro oo ahaa shaqsi xiriirinayey dadka Soomaaliyeed iyo gabadhaasi.
Binti Jaylaani waxay u mahacelisay intii lacagahaasi soo gaarsiisay, waxayna illaah uga barisay in bedelkeeda mid ka badan siiso.
Binti oo marba marka ka dambeysa xaaladdiisa ay ka sii liidaneyso ayaa waxay ugu baaqeysaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool caalamka in kala tacaalaan buradaasi oo ay sheegtay in ay si fudud looga daweyn karo haddii dibadda loo qaado.
Dad Soomaaliyeed oo fara badan ayaa haatan u ololeynaya sidii gabadhaasi dibadda loogu qaadi lahaa si ay u hesho qaliin.
Dadka lacaga soo gaarsiiyey qaarkood ayaa codsaday in magacooda la sheegin oo waraaqaha ay ku soo direen ayaa ahaa kuwo aan magac ku qorneyn, kuwana waxay ahaayeen kuwo ay magacyo ku qornaayeen, dadka lacagahaasi soo diray waxaa ka mid ahaa.
1. Xaawo Max�ed Faarax (Oslo, Norway)
2. Xabiibo Cali Dharaar (Birmingham, England)
3. Hodan Max�ed Faarax (Oslo Norway)
4. Faadumo Xuseen Maxamuud (Hanwel)
5. Liibaan Daahir Warsame (London, England)
6. C/rixiin Sh. Cali (Dublin, Ireland)
7. Gabdho Soomaaliyeed (London, England)
8. Jaamac C/Qaadir Jaamac (Dubia, U.A.E)
9. C/llaahi Axmed Xaaji (NRA)
10. C/Nasir Max�ed Ciise (Stockholm)
11. Ismaaciil Sh. Max�ed Xuseen (S W A)
12. Sahro Abuukar Sheekhow (Stockholm)
13. Qadar A. Nuur (Minnesota)
14. Sahro (Mennesota)
15. Ubax (�...............)
iyo dad fara badan oo aan halkaan ka soo koobi karin
Waxayna hadda Degdeg ugu baahan tahay Kharashkii lagu geyn lahaa Nairobi siloogu diyaariyo Visa-da dal ku galka Australia...
Waxaa farxad weyn ii ah in aan shacaka Somaliyeed ee danaynaayey arinta Binti Jaylaani Maxamed Cabdi, oo afka buro ka soo baxaday, la socdsiiyo, in gabadhaas ay ogolaatay hay�ad waddani ah, kana shaqaysa waddankan Australia, khaasatan magaalada Melbourne. Hay�adan ayaa ah mid horay u keenijirtey caruurta Soomaalida waddankan Australia si loogu daweeyo. Waxaanu mahad gaara u direynaa Ebbaha nagu guulaysiiyey arinkan, iyo dadka ka qayb qaatay doonta arinkan.
Binti Jaylaani ayaa waxaa sawiradeeda ii soo gudbiye Somali badan oo uu ugu horeeyey website-ka SomaliTalk.com oo si gooni ah codsi iigu soo gudbiyey. Waxaan kale oo jira dad badan oo si gooni gooni ah arinta iigala soo hadlay, iiguna soo gubiyey. Waxaan kuligiin idiin sheegaya in gabadhaas arinteedi keenista ay hada bilaabatay, dhakhtarkii qali lahaa iyo hoygii ay joogi lahaydna la dhameeyey.
Shirkadda: TABOUK SHIPPING
Markii aan qormadan daabacnay (May 31, 2007) waxaa SomaliTalk.com ballan qaaday in shirkadda ugu horeysa ee bixisa tigir-ka diyaaadda ee Binti Jeylani ee Muqdisho-Nairobi in shirkaddaas muddo hal sano ah lagu xayaysiin doono SomaliTalk.com. Waxaa markiiba May 31, 2007 nasoo gaarey in shirkaada Tabouk Shipping ee xarunteedu tahay Dubai ay bixineyso tikidhkaas. Mid ka mid hawl-wadeenada shirkadda Tabouk Shipping, oo ah Abshir Xuseen Cusmaan, waxa uu sheegay in lacagta ay shirkaddu ballan qaaday aan wax shuruud ah ku xirnayn, haddii la xayaysiisyo iyo haddii kaleba waa sadaqo, ayuu yiri. Haddaba bahda SomaliTalk siday ballan qaaday xayaysiiskii shirkadda Tabouk ka akhri halkan
Hadaanu nahay reer Melbourne, waxaanu soo dhamaynay, anagu, dhakhtarkii qali lahayd, cisbitaalkii lagu qali lahaa iyo kharajka joogitaankeeda waddankan Australia. Waxaa kale oo na sugaya, in aan kharajka qaliinka iyo daawada bixino hadii nalooka baahdo. Sidaas darteed waxaan Somalida qurbaha, iyo ganacsatada Somaliyeed aan ka codsanayaa in ay ka qayb qaataan gabadhaan kharajka lagu keenayo magaalada Nairobi oo loo baahan yahay in la keeno si visa looga dalbo safaarada Australia u fadhida magaalada Nairobi ee wadankaas Kenya.
Waxaa loo baahan yahay kharajkii keenista iyo ku haynta, iyo weliba barista arimaha caafimaadkeeda kale, inta aan la siin visa-da, amaba dal ku galka waddankaan Australia. Waxaan dawalada Federalka Ku Meelkaarka ah, safaaradeeda ku taala magaalada Nairobi, ka codsaneynaa, in ay gabdhaas ka caawiso, sidii ay visa-da dal ku galka Kenya uga caawini lahayd.
Cidii danayneysa, caawimid, amaba arinta gabadhaas, waxaa ay la xiriirikaraan, hawl waddeenada United Somali Women Organization, oo iyagu howsha gabadhaas gacanta ku hayndoona inta ay ku sugan tahay waddankan Australia. Hawl-wadeena hay�adan Somalida ah ayaa waxaa ay shalay la shireen hawl-wadeenada hay�ada gabadha keeneyeysa, waxaana ay isku afgarteen in arinta Binti Jaylaani ay wadda wadidoonaan labaadaas hay'adood. United Somali women Organization ayaa balan qaaday in ayan wixii awoododa ah, marna ka hagrandoonin gabadhaasi inta ay waddankan ku sugan tahay. Waxaa ay balanqaadeen in ay abaabulidoonaan dad ka shaqeeya, cisbitaal kuhaynta, dhakhaatiir la shirka, uturjumida iyo ururinta dhaqaalaha qaliin ee loo baahankaro. Waxaa xusud mudan in hay�adani ay si gooni ah u codsatay in arinta gabadhaas in ay xil gooni ah isga saaraan, lana wareegaan hawsha gabadhaas, markaan ku jirey raadinta keenista gabadha waddankan. Waxaana aad ugu faraxsanahay in ay dusha u tuurteen ka shaqaynta daryeelka iyo caawinada gabadhaas inta ay wadankaan joogto, kuna sugan tahay gacata hay'ada oo iyadu masuuliyada guud qaaday, hayneysana gabadhaas inta ay waddankan ku sugan tahay.
Waxaad kala xiriirikartaan United Somali Women�s Organization hablaha kala ah, Fartuun Faarax oo ah Gudoomiyaha hay,ada, taleefonkeeduna yahay  iyo Zeinab Maxamud (Ubax Islaweyn) oo ah ku xigeenka, taleefonkeeduna yahay . Hadii kale, aniga ayaa igala soo xiriirikartaan taleefonka ah  amaba emailka ah imfarah@students.latrobe.edu.au aniga ayaa wixii fariin u gudbindoona Fartuun iyo Zeinab.
Ciise Maxamuud Faarax (Dholowaa)
Bahda SomaliTalk.com waxay mahad gaar ah u jeedinayaan dawladda Australia oo had iyo jeed si fudud fiisooyinka dal ku galka ugu sahlayey carruurta Soomaaliyeed ee lagu soo daweynayo Australia. Waxa kale oo aan u mahad celineynaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee Australia oo markasta u taagan garab siinta carruurta Soomaaliyeed. Si gaar ah waxaan ugu mahad celineynaa ururka haweenka Soomaaliyeed ee ku sugan Australia oo xannaaneeya carruurta bukaanka ah ee la geeyo Australia inta daweyntu u socoto ilaa lagu soo celinayo Soomaaliya.
Waxa kale oo ammaan gaar ah leh Ciise Dholowaa (PhD Candidate, School of Historical and European Studies, La Trobe University, Bundoora.) oo markasta u istaaga carruurta ku tabaalaysan Soomaaliya sidii ay u heli lahaayeen dhakhaatiir lagu daweeyo.
Binti Jeylaani waxaa hadda u bilowday sidii loogu diyaarin lahaa safarkeeda Australia si loogu soo daweeyo, kaddibna loogu soo celiyo dalkeeda hooyo. Waxaa hadda muhiim ah in la helo kharajkii lagu geyn lahaa Nairobi, kharajkii inta uu u socdo baaritaanka caafimaad ee diyaarinta Visa-da Australia iyo kharajkii ay ku joogi lahayd Nairobi - Waxaana arrintaas laga sugayaa ummadda Soomaaliyeed sidii ay gacan uga geysan lahaayeen.
Binti jaylaani waxay ka soo jeeda qoys sabool ah oo waxba aan heysan, waxaana hadda lagu xanaaneeyaa cisbitaalka Banaadir ee Muqdisho, waxaana gabadhaas laga keenay degaanka Wanla-weyn kaddib markii ay ku weynaatey Burada oo hadda ku taal ilaa laba sano, waxayna muslimiinya Soomaaliyeed ka sugeysaa gargaar degdeg ah maadaama loo helay meel lagu daweeyo in ay ka bixiyaan kharashka lagu geynayo Kenya iyo xanaanaynteeda inta ay sugeyso safarka Australia.
Sawirada Binti Jeylaani ka eeg halkan:::
Binti Jeylaani waxay u baahan tahay Gargaar deg deg ah.
Qofkii ay naxariisi ku dambeyso ha u gargaaro gabadhaani
Binti oo ay buro aad u weyn ka soo baxday afka sida aad ku arki doontid sawirada hoose, waxay ka soo jeeda qoys sabool ah oo waxba aan heysan, waxaana hadda lagu xanaaneeyaa cisbitaalka Banaadir ee Muqdisho, waxaana gabadhaas laga keenay degaanka Wanla-weyn, waxayna muslimiinya Soomaaliyeed ka sugeysaa gargaar degdeg ah... Akhri warbixinta hoose.....
Tel 002521-5532494 | Muqdisho
Mar aan booqdey Isbitaalka hooyada iyo dhalaanka ee Banaadir ayaan waxaan halkaasi ku soo arkey gabar aad u dhibtoon oo lagu magacaabo Binti Jeylaani Maxamed oo dadeedu tahay 16 sano waxay gabadhaani buro weyn uga soo baxey afka gaar ahaan inta u dhaxeysa carabka iyo dhebxanaga waana buro qofkii arkaa uu aad uga naxayo indhihiisana ay ilmo ku soo istaageyso.
Markii aan la sheekeestey gabadhaasi waxay ii sheegtey in cudurkaani ay isku aragtey mudo labo sano ka hor isla markaana maalin maalinta ka dambeysa ay soo koreysay.
Gabadhaani oo xeran Xijaab amaba insha- Shareer ayaa in muda ah Xijaabkaasi ku qarineysay cudurkaani halista ah mar aan weydiiyey in ay wax cuni karto iyo in kale waxay Binti ku jawaabtey �Haa cuntada si fiican ayaan u cuni karaa iyo weliba cabitaanada.
Binti Jeylaani iyo walaasheed
Binti Jeylaani oo laga keenay Deegaanka Wanla-weyn ayaa waxaa isbitaalka haatan ku xanaaneeya Maamulka Isbitaalka Banaadir. Sidoo kale gabadhaasi hadalkeeda waa mid fasiix ah oo wareysiyada aan ka qaadayey si wanaagsan ayay uga jawaabeysay, laakiin buradaasi halis ayey ku tahay caafimaadkeeda.
Dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka Banaadir Gaar ahaan Dr C/risaaq wuxuu inoo sheegey in gabadhaani aan dalka waxba loogaga qaban Karin asagoo sheegay in hadii la heli lahaa qalabka gabadhaasi wax loogu qaban lahaa uu wax ka qaban lahaa balse taasi maanta ma heyno.
Binti Jeylaani burada afka ka soo baxday
Binti oo ka soo jeeda qoys sabool ah waxba aan heysan ayaa waxa ay ka codsaneysaa bulshada Soomaliyeed oo ku nool dalka iyo dibadaba inay gacan ka geystaan sidii gabadhaasi looga qali lahaa Buradaasi.
Haddaba cidii dooneysa inay gabadhaasi gacansiiso amaba u gargaareyso waxay kala soo xiriiri kartaa.
Oo laga helo
Faafin: May 15, 2007